Caddibaaddii Reer Muqdisho iyo Casuumaadda Madaxda Shisheeye. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Sep 15, 2016 230 0
Reer muqdisho waxaa loo diiday in ay fagaarayaasha salaadda ciidda ku oogaan oo waxaa laga xiray jidadka taas cagsigeedana waxaa caasimadda lagu casuumay madaxda wadamada ciidamadoodu xasuuqa u geysteen dadka soomaaliyeed.
Aqoon yahan xasan fiyooke oo ay wareysatay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa sheegaya in madaxda dartood shacabka loo dhibateeyay iyo kuwa soomaalida ah ee dowladda federalaka ah ka tirsan aanay jirin wax farqi ah uu u dhaxeeya.
Xasan fiyooke ayaa si qotta dheer u lafa guray shirka urur gobaleedka Igad ku yeeshay muqdisho ee aawadiis loo dhibaateeyay dadka soomaaliyeed ee gancsigii isu socodkii iyo cibaadadii laga horjoogsaday.
Dhageyso Waraysiga Xasan Fiyooke